eNasha.com - माओवादी ट्राफिक नियम
कुनै माओवादी नेताले सुनिरहेको त छ, के ?
नेपालको ट्राफिक अव्यवस्था यस्तो छ कि त्यसप्रति दया लागेर विदेशीदेखि विद्यार्थीसम्म यसलाई सुधार्न समयसमयमा लागिपर्ने गरेका छन् । शहरमा बसेर आफैँले पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक नियमहरु सभ्य शहरीलाई घरिघरि सिकाइरहनुपर्नेअवस्था छ । यस्तो अवज्ञा देखेर जापानी बाबादेखि माओवादीसम्मले यसमाथि चासो देखाएका छन् ।
माओवादीले र्सवसाधारणलाई सिकाउने शैलीमा अहिले एउटा पर्चा बनाएको छ । पर्चामा भनिएको छ- नयाँ गणतान्त्रिक नेपालका सभ्य नागरिकले ट्राफिक नियम कसरी पालना गर्ने !
पर्चामा लेखिएको छ - म ट्राफिक सडक नियम पालना गर्छु । म आकासे पुलबाट मात्र बाटो काट्ने गर्छु । म सडकपेटीबाट मात्र हिँड्ने गर्छु । म गाडी चढ्दा हुलमुल गर्दिनँ । जथाभावी गाडी रोक्दिनँ । अनावश्यक हर्न बजाउँदिनँ । चालकले) बटुवालाई बाटो काट्न प्राथमिकता दिन्छु । सडकमा जथाभावी पसल थाप्दिनँ । जेब्राक्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गर्छु । म बाल, वृद्ध र असहायलाई सहयोग पुर्‍याउँछु ।
यो पर्चा चाहिँ नयाँ काठमाडौँ उपत्यका अभियान सफल पारौँ भन्ने नाराका साथ नयाँ काठमाडौँ उपत्यका अभियान, उपत्यका क्षेत्रीय ब्यूरोले जारी गरेको छ ।
तर यी सबै कुरा पढ्दै जाँदा चाहिँ सर्वसाधारणको मनमा केही प्रश्न उब्जिन्छन् । माओवादीको कुनै किसिमको कार्यक्रम हुँदा माओवादी कार्यकर्ताहरु बसको छत, हुटमा खाँदिएर होहल्ला मच्चाउँदै राजधानीको सडकमा कुद्दै गरेको हामीले देखिरहेकै कुरा हो ।
एक साताअघि ठमेलको 'वन वे'मा माओवादी कार्यकर्ताहरुले गाडी छिराइदिए । यसपछि अरुलाई दुःख त दिए नै उल्टै केही ट्याक्सी चालकहरुलाई भकुर्नु पनि भ्याए । साथमा ट्याक्सी ड्राइभर र प्रहरीको एक टुकडीले पनि तिनीहरुमाथि राम्रैसँग हातपात गरे । नयाँ नेपालका सभ्य नागरिकका हैसियतले 'वन वे' भनेको 'टु वे' होइन भन्ने बुझ्नपर्छ र त्यो उनीहरुकै लागि मात्र परिवर्तन हुन सक्तैन भन्ने कुरा त झनै ज्ञान हुनुपर्छ । त्यसैले, अर्को एउटा नियम पनि बनाउनु जरुरी छ- हामी नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको सभ्य नागरिक हुने अभ्यासमा रहेकाले आफ्ना ती गलत क्रियाकलापमा पछुतो मान्दै अब आइन्दा अरुलाई भकुर्नुअघि तीन पटक सोच्नेछौँ र कहिले पनि 'वन वे' मा छिर्ने छैनौँ ।
राजधानीको खुलामञ्चमा माओवादीको भाषण कार्यक्रम हुने गर्दछ । त्यो अवधिभर यातायातलाई सुचारु राखिरहन भरमग्दुर प्रयास गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई घर फर्कन तयार भएका बसको हुटमाथि उनीहरुलाई राखेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगर्ने आदि जस्ता आधारभूत नियमहरु पनि समावेश गरिदिए ज्यादै असल हुने थियो ।
माओवादी संविधानसभा हल्ला awards पेट्रोल समलिङगी मोबाईल सेलेब्रिटी अनुभव celebrity crisis hi-life streets festival events